Johnson 10 HP Seahorse Tune-Up Project | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
Uma une amazwana noma umbuzo ngalokhu Johnson 5.5 HP Seahorse, noma ezifanayo Tune-UP Project, sicela ushiye ngezansi. Kumele Ngena ngemvume uma ufisa ukushiya amazwana.
manje Ungangena ngemvume nge-akhawunti yakho ye-Facebook.
Kuthunyelwe ngu- Matt NgoThu, 06 / 06 / 2019 - 20: 05
Izimpawu ze-Magneto zeplate yokubeka igeyinti yephuzu kanye ne-flywheel
Siyabonga ngokuthatha isikhathi sakho ukudala izinqubo zokufundisa zokulondolozwa kuma-outboards amadala. Bengilokhu ngishintsha amaphuzu, ikhoyili nama-condens ngo-1958 Johnson 10hp kulandela indlela yakho yokubeka amaphuzu. Uma ngifaka i-cam kumaki we-Top ngamaphoyinti avulekele ku-.20 bese ngigxila ku-flywheel, iqondaniswe nokhiye, uphawu ku-flywheel engizolusebenzisa ukusetha amaphuzu akukho lapho kuseduze namamaki amabili kupuleti le-magneto. Ngiyisusile ipuleti le-magneto (ngishintshe izintambo ze-plug) futhi ngafaka kabusha, ingabe ipuleti kufanele liphinde libuyiselwe emuva ekulandeleni inqubo ethile? Noma uqondaniswe nomaka othile?
Kuthunyelwe ngu- ttravis NgoThu, 06 / 06 / 2019 - 23: 02
Ekuphenduleni Izimpawu ze-Magneto zeplate yokubeka igeyinti yephuzu kanye ne-flywheel by Matt
Izimpawu ze-Magneto plate ......
Ngicabanga ukuthi kunendlela eyodwa kuphela yokubeka ipuleti le-magneto. Akukho ukulungiswa.
Kunokubhala okubili engikwenzele uhlelo lokushisa. Ngenzele eyodwa 3.0 Evinrude futhi enye ye- 5.5 Johnson. Ngazibhala ngezikhathi ezahlukahlukene, futhi ziyahambisana, ngakho-ke ngincoma ukuthi uzifunde zombili. Kokubili lokhu kanye ne-moter yakho konke kunohlelo olufanayo lokuthungela. Ngicabanga ukuthi u-5.5 wenza umsebenzi ongcono wokuchaza iphuzu lakho. Lapho ngichaza ukuthi kungadingeka ukuthi ulungise igebe lephuzu lokuhlukanisa ukuze ulibeke phakathi kwamamaki njengoba amaphuzu evulekile. Uma ungenalo uphawu ku-flywheel yakho yesilinda sesi-2, kungadingeka ukuthi uzenzele nge-sharpie ohlangothini oluqonde ngqo noma ama-degree ayi-180. Kukhona uphawu olulodwa kuphela kusisekelo se-stator.
Ngiyethemba angikudidanga. Uma usadinga usizo, ngingakukhomba kongoti abangcono kunami.
Kuthunyelwe ngu- Matt ku Fri, 06 / 07 / 2019 - 19: 34
Siyabonga ngempendulo. Ngi…
Siyabonga ngempendulo. Ngisola ukuthi kunesikhundla esisodwa kuphela sepuleti lesikhali, ngenxa yokuxhumeka kumpintsha. Kuzo zombili izibonelo (3.0 no-5.5), uthi "Lapho uphawu lwesikhathi ku-flywheel luphakathi kwamamaki amabili epuleti lezikhali, amaphuzu kufanele avuleke futhi imitha le-ohm lizoshintsha lisuke ku-0 liye kuma-ohms angenamkhawulo." Lapho uphawu lwesikhathi likule ndawo, imitha ifunda uziro. Uma ngikhipha i-flywheel (ngokucophelela), isicathulo samaphoyinti asekhamini asiseduze nendawo ephakeme, ebhalwe ukuthi "Phezulu". Uma ngiguqula ngokuphelele impintsha ukuhambisa ipuleti lezikhali, ngingakuthola eduze neTop, kepha hhayi kuTop.
Nginomuzwa wokuthi ngenza iphutha eliyisisekelo kakhulu kule nqubo, njengoba kubonakala sengathi kufanele kube phambili ngqo.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Sat, 06 / 08 / 2019 - 11: 10
Ekuphenduleni Siyabonga ngempendulo. Ngi… by Matt
Uqinisekile ukuthi unayo ...
Ingabe uqinisekile ukuthi unamaphuzu afanele aleyo moto? Ngayacabanga kuphela.
Kuthunyelwe ngu- sos911 Ku-Mon, 06 / 22 / 2020 - 12: 13
1956 Johnson Johnson QD-17 10HP
Ngifuna umqalisi wokuphinda athathe indawo wale moto yesikebhe (1956 Johnson QD-17 10HP). le ekhona njengamanje emotweni iphukile enkabeni. Ingabe noma ubani unazo izincomo noma kuphi ukuthola umthombo wokuphindisela. NGIYABONGA